Ugbo ugbo na ndi njem - IntoKildare
Ndị Mary na Michael McManus na-arụ ọrụ, Forest Farm na-enye ọtụtụ ebe obibi. Caralọ Caravan na Camping na-eje ozi zuru oke dị na ugbo ezinụlọ a mara mma.
O di 5km site na obodo nketa nke Athy, Ugbo ohia bu ezigbo njem nlegharị anya iji nyochaa County Kildare. Akụrụngwa gụnyere ekele mmiri ọkụ, ihe isi ike, ụlọ mposi, friji friza, kichin camper na ọkụ 13A. Ugbo a na-arụ ọrụ na-egosipụta ọmarịcha osisi Beech na osisi Evergreen.
Isiri onwe nri, Maa ụlọikwuu Kildare, mmefu ego, Pet Friendly, Ezigbo ezinụlọ, 3 Star, Okwesiri
Zọ Dublin, Okwesiri, Obodo Kildare, Ireland.